ढुक्क भएर कारोबार गरे हुन्छ, साउन १ गतेदेखि सेयर कारोबारमा भ्याट नलाग्ने भो !
ARCHIVE, MARKET WATCH, MUDRA MAMILA, TAX, कर तथा कानुन » ढुक्क भएर कारोबार गरे हुन्छ, साउन १ गतेदेखि सेयर कारोबारमा भ्याट नलाग्ने भो !
काठमाडौँ - साउन १ गतेदेखि भ्याट लाग्ने भनिएपनि अन्तत यो मुद्धा हालका लागि तुहिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४-७५ को पहिलो दिनदेखि भ्याट लाग्ने भनिएपनि अन्तत सेयर कारोबारमा तत्काल भ्याट नलाग्ने भएको हो ।लगानीकर्ता संघ, इन्भेष्टर्स फोरम र ब्रोकरहरुको तीब्र बिरोधपछी तयारी नपुगेको भन्दै साउन १ देखि सेयर कारोबारमा भ्याट नलाग्ने भएको हो ।
'भ्याटका विषयमा अहिले कुनै तयारी भएको छैन ।' ब्रोकर एसोसिएसनका सचिव टंक गौतमले भने, 'आन्तरिक राजश्व विभागले केहि समय अघि यसबारे खोजी गरेको थियो । तर अहिले कुनैपनि तयारी छैन । साउन १ गतेदेखि सेयर कारोबारमा भ्याट लाग्दैछ भन्ने कुरा गलत हो ।' उनले भने । गत बुधबार धितोपत्र बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउन नहुने बताएका थिए भने पूर्वअर्थमन्त्री राम शरण महतले पनि सेयर कारोबारमा भ्याट नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यद्यपी यो मुद्धा हालका लागि मात्र तुहिएको बताइएको छ । भ्याट सम्बन्धि कुरामा केहि ब्रोकर कम्पनीले नै गलत प्रचार गरेपछि हालका लागि यो मुद्धा तुहिएको हो । 'भ्याट भनेको ब्रोकरको कमिसनमा लाग्ने हो । त्यो पनि इन्क्लुसिभ हुन्छ । भ्याट लाग्ने कुरा कार्वनयनमा आएपनि लगानीकर्ताहरुलाई केहि असर गर्दैन । तर ब्रोकरहरुले १३ प्रतिशत अन्त जाने भो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् ।' आन्तरिक राजश्व विभाग स्रोतले अर्थ सरोकार डटकमसँग भन्यो ।
Tags : ARCHIVE, MARKET WATCH, MUDRA MAMILA, TAX, कर तथा कानुन